अब के हुन्छ नवराज सिलवाल विरुद्धको मुद्दा? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अब के हुन्छ नवराज सिलवाल विरुद्धको मुद्दा?
प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार February 15, 2018
अदालतमा मुद्दा पेस भएपछि बहस हुनेछ । अदालतले फरार अभियुक्तलाई बयानका लागि ७० दिनको म्याद दिनेछ । ७० दिनभित्र बयानका लागि फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर नभए मुद्दा कमजोर भएको ठहरिनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशले फरार अभियुक्तविरुद्ध आवश्यक दण्ड–जरिवानासहित मुद्दाको फैसला गर्नेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा लगातार बढेको सुनको मूल्य दुई दिनदेखि स्थिर रहेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको […]
क्रिकेटमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका नेपाली क्रिकेट टोली आज साँझ स्वदेश […]
अस्ट्रेलियामा हुने संक्रान्ति फेष्टिभलमा खड्क र मुनाको स्वर गुन्जिने
पुस २३, सिड्नी- मगर समाज अष्ट्रेलियाले जनवरी १७ तारिखका दिन माघे संक्रान्ति महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । […]
कमल थापाको पुत्ला दहन
काठमाडौं, राप्रपा नेपालको एक समूहले पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको पुत्ला दहन गरेका छन । राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण […]
बुटबिना मैदानमा मेसी !
एजेन्सी । ला लिगा अन्तर्गत शनिबार भएको खेललाई मानिसहरुले विशेषरुपमा हेरे । यस सिजन लयमा रहेको बार्सिलोनाले […]
म्यानचेस्टर युनाइटेड एफ ए कपको सेमिफाइनलमा
एजेन्सी । म्यान्चेष्टर युनाइटेड एफ ए कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । ब्राइटनलाई २-० ले हराउँदै म्यानचेष्टर […]